Alain Delon "aida kudanana zvikuru" ... asi zvakare "achida" - TELES RELAY
HOME » VANHU & VANHU Alain Delon "aizoda kuda murudo zvakanyanya" ... asi zvakare "achida"
Alain Delon "aizoda kudanana zvakare" ... asi zvakare "achida"
Pamakore e83, Alain Delon ichiripo mwoyo unotora. Mutambi wechiFrench anozivikanwa akapa hurukuro itsva kune vashandi vedu kubva Gala, maanozivisa kuti anoda kusvika pakuguma kwehupenyu hwakazara norudo, kune maoko omukadzi mutsva. Dambudziko: kana vanokakavara vakawanda kugogodza pamukova wake, Baba vaAnthony, Anouchka naAriin-Fabien havana kuisa chivimbo chavo, uye inowira murudo.
"Kune vashomanana vanoda kufambidzana neni mune izvi mugumo wehupenyu, asi kwandiri kwandiri kuti havaendi. Ndiri kunyatsokumbira, kunyange kana zviripo, inogona kuva chero " anoziva Alain Delon. Mutevedzeri wevodencia anotaurawo kuchema kwemoyo: "Ndinoda kuda murudo uye kumuudza kuti ndinomuda". kana kutora "Possessive" et "Godo", zvisinei, mutambi akati haana kumbove "Chinji" : "Ndinoda vakadzi, ndine chikwereti kwavari zvose".
Rudo nyayaAlain Delon akaziva vazhinji, uye mazhinji awo akaparidzirwa. Kubvira ku1959 kusvika ku1963, mutambi wacho akararama kunyanya chido chaicho naRomy Schneider, uyo waakatambidzwa naye. Muna 1962, anogara hukama hwepachivande naye muimbi Nico, uyo anoberekera mwanakomana, Ari Boulogne, uyo baba vaAriin Delon vachiri kunetsa nhasi. Mu 1964, anoroora Francine Canovas, iro raakaberekerwa Anthony Delon. Mumakore gumi aya, iyewo anorarama nyaya yerudo naDalida, kuti akabuda nemanzwiro pane CNEWS bhomba mashomanana akapfuura.
Ukama hwake hunoshamisa hapana mubvunzo kuti imwe chete akararama naMireille Darc, pakati pe1968 ne1983. Akabva awana rudo nemusikana anonzi Anne Parillaud, iye zvino naCatherine Belynie. Pakupera kwemakore e1980, anoungana naRosalie van Breemen, muDutch muenzaniso kubereka vamwe vana vaviri, Anouchka and Alain-Fabien. Vanoparadzaniswa mu2001, mushure memakore gumi namana ehupenyu pamwe chete.
Alain Delon - Vanosvika panguva yekudya kwehurumende mukukudzwa kweMutungamiri weRepublic of China X.Jinping
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.closermag.fr/people/alain-delon-aimerait-tellement-retomber-amoureux-mais-est-trop-exigeant-970142
Meghan Markle zvakadanwa zita rokuti princess paChipiri chekuberekwa kweChicheche
Vanhu: Anjelica Huston, nyeredzi yemufirimu The Addams Family, hazvizivikanwi makore 25 mushure mokunge asingakanganwiki basa rake